Windows 10 iyo isticmaalka freespace weyn
Windows 10 iyo isticmaalka freespace weyn Bilood 6 2 todobaad ka hor #1584
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 3
Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee leh FSX,FSXA waa xaddiga RAM iyo qulqulka ay qaadan karto. Si barnaamijku sifiican ugu shaqeeyo waxaa jira waxyaabo dhawr ah oo aad sameyn karto si barnaamijkaagu si fiican ugu shaqeeyo. Marka hore waa in la aado qeybta koontaroolka iyo muuqaallada, calaamadee calaamadda waxqabadka. Ka dib ku dar menu menu oo waxaad dejisay bogga 5000 si aad u bilowdo. Windows waxay u isticmaashaa waxaad u dejiso sidii wan oo kale. Mid kale ayaa ah in la isticmaalo USB USB sare oo xusuusta sare ah loona aasaaso teadyboost. Meesha ka saar oo ha u isticmaalin wax kaydsan. Dib ugu celi magaca Virtual Ram. Hadda tallaabada xigta waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu waaweyn ee bannaan ee bannaan ee aad heli karto. Ku samee midigta guji c drivekaaga isla markaana aad xagga sare, u rogo si aad ugu cadaato faylalka iyo faylal-hoosaadka ayaa calaamadinaya calaamadda ok iwm iyo waxay la imaan doontaa bilowga, haddii ay tiraahdo wax kale oo aan ahayn go aanka ama diidmada guji iska dhego tir. Waa ay dhici doontaa, taas oo adiga ku siin doonta 4 illaa 5 gig oo kaliya taas dhexdeeda. Anigu shaqsiyan waan sameeyaa Fsx Marka hore waxaan fayl gareeyaa markaa waa 86x ka dibna faylalka daaqadayda labadaba 86, markaan dhaho Windows waxaan tixraacayaa faylka ugu weyn ee Windows, ka dibna dib ugu noqo furitaanka halka ay ku tusayso safka dhammaan C:. Hadda markaad cadaadinayso waxay ku siin doontaa mgg sida maalin un oo aad dhammaystirto, waxay akhrin doontaa dhammaan faylasha markaa way isku xirnaan doontaa, markaa ha waalan, dhaqso ayey u dhammaan doontaa. Waxaa jira inka badan 4 milyan oo faylal iyo faylal fayl ah oo faylka ku jira oo waxay qaadatay qiyaastii 30 daqiiqo oo ka soo horjeedda digniinta ay bixisay. Xal kale ayaa ah kahor intaadan bilaabin fsx FSXGo a raadinta nooca% temp% oo tirtir dhamaan. Faylasha aan tirtiri doonin walwal ha ka qabin. Marka aad dhammeyso waxaas oo dhan oo aad xasuusato mar haddii aad adigu sameyso waxkastoo sameeyn ah, ka dibna ka qaad shaashadda qalabka shaashadda oo had iyo jeer iska saar baarkaaga shaashadda,, waxay kuu horseedi doontaa dhalaalaya. Si loo ogaado wax kasta iyo dhammaan jid-gooyooyinka ayaa ka qaada meel bannaan oo bilaash ah waxayna sababi karaan gaabis. Liiska bilawga waa meesha aad rabto wax walba. Arimaha diyaaraduhu ma muujiyaan had iyo jeer waxay ka mid tahay laba shay, maahan fsx, waa p3 ama kuma uusan ku jirin faylka saxda ah. Su aalo kasta ha iga tagto halkan ama mg. Waxaan hayaa boqol siyaabood oo aan ku sameeyo Fsx kaamil ah, waqti ayey qaadataa. Goorma FS2020 Imaadaa wali waxaa layga saari doonaa arintan maadaama ay ahayd aalad waxbarasho oo weyn, yaase doonaya inuu tuuro wax ka badan 12 sano oo shaqo? Waxaan u maleynayaa inaan ku deeqi doono isbitaal Veterans. Semper Fidelis, Sannadka Cusub oo Farxad ah, waxaan kugu aragnaa Waqtiga Fagaaraha.
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray StonewallUSMC. Sababta: Misspell